अढाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगाएर ‘भ्यू टावर’ बनाउनुभन्दा स्थानीय जनताका आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमकका जनताले आग्रह – सप्तरंगी एफ एम
Home / ट्रेन्डिङ्ग / अढाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगाएर ‘भ्यू टावर’ बनाउनुभन्दा स्थानीय जनताका आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमकका जनताले आग्रह
सप्तरङ्गी एफ.एम.दमक/माघ १४/
अढाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगाएर ‘भ्यू टावर’ बनाउनुभन्दा स्थानीय जनताका आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमकका जनताले आग्रह गरेका छन् ।
दमाकका धेरै सर्वसाधारणले पहिला जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने संरचना निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
त्यसैपनि तराईको समथर भूभागमा फैलिएको झापामा दृश्यवलोकन गर्न बनाइने भनिने ‘भ्यू टावर’बाट के के देख्न सकिएला भनेर प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् ।
दमकमा बन्ने भनिएको भ्यू टावरभन्दा भ्यु टावर बनाउने भनिएको ठाउँमा जाने सडकको स्तरोन्नति गर्न दमक ३ दुम्सेका ज्ञानु बुढाथोकीले सुझाव दिनुभयो ।
“१,भ्यू टावरको अढाई अर्ब रुपैयाँ अस्पताल निर्माणमा लगाउने हो भने गतिलै अस्पताल बन्ने ।
२,भ्यू टावरको बजेट सडक स्तरोन्नितमा लगाउने हो भने दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक ड्रेनसहितको कालोपत्रे बन्ने ।
३,भ्यू टावर बनाउने पैसाले १० वटाभन्दा बढी माध्यमिक तहका विद्यालय बनाउन सकिने ।
४,भ्यू टावरको पैसा विद्युत्मा लगाउने हो भने पूर्वी तराईका तीन जिल्लामा पर्याप्त बिजुली पुग्ने संरचना बनाउन सकिने ।
५,भ्यू टावर बनाउने पैसाले ३५ अर्ब रुपैयाँका करिब आठवटा खानेपानी आयोजना बन्ने ।”
उहाँले सडक छेउका नागरिक धुलो खाएर बसिरहेका बेला भ्यु टावरको कुनै अर्थ नरहने बताउनु भयो ।
आफ्नो १६ औं अनसन सुरु गर्दै गर्दा डाक्टर गोविन्द केसीले पनि दमकका भ्यु टावर बनाउनु भन्दा उक्त रकमले यहि ठाउँमा अस्पताल खोल्न सुझाव दिनु भएको थियो ।
प्रदेश नं. १ का स्वास्थ्य निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलका अनुसार दमक क्षेत्रमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल अनिवार्य आवस्यकता भएको छ । अस्पताललाई चाहिने जनशक्तिका लागि योजना बनाएर भ्यू टावरको अढाई अर्ब रुपैयाँ अस्पताल निर्माणमा लगाउने हो भने गतिलै अस्पताल बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
भ्यू टावरको बजेट सडक स्तरोन्नितमा लगाउने हो भने दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक ड्रेनसहितको कालोपत्रे बन्न सक्ने प्रदेश नं १ को यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक इन्जिनियर राजेश घिमिरेले बताउनु भयो । जसबाट दमक क्षेत्रका मुख्य सडकहरू कालोपत्रे बन्न सक्छ । दमक ३ मै रहेको चुलाचुली आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद गुरागाईँले पनि भ्यू टावर बनाउनुभन्दा जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था गराउनु आग्रह गर्नु भयो ।
झापाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र बरालले पनि भ्यू टावर बनाउने पैसाले १० वटाभन्दा बढी माध्यमिक तहका विद्यालय बनाउन सकिने बताउनु भयो ।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दमक शाखाले गत कार्तिकमा दमक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्नका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्यायो । तर अहिलेसम्म जनतालाई विद्युत् सेवा दिने उक्त बजेट प्राप्त भएको छैन । तर शहरी विकास मन्त्रालय दमक ६ ढुकुरपानीमा भ्यू टावर बनाउनका लागि टेन्डर खोल्ने प्रक्रियामा रहेको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले पनि दमक १ र १० नं. वडाका धेरै स्थानमा बिजुली नपुगेको प्राधिकरणका दमक शाखा प्रमुख जितेन्द्र यादवले बताउनु भयो ।
‘भ्यू टावर’को पैसा विद्युत्मा लगाउने हो भने पूर्वी तराईका तीन जिल्लामा पर्याप्त बिजुली पुग्ने संरचना बनाउन सकिने विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
त्यसैगरी दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्र आधा जनसङ्ख्यामा मात्रै सुद्ध खानीपानीको व्यवस्था पुगेको छ ।
दमक बजारको दक्षिण क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था पुग्न नसकेको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रोशन गौतमले बताउनु भयो ।
दमक क्षेत्रमा मात्र खानेपानीको व्यवस्था र्पुयाउन अझै करिब ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने उहाँले बताउनु भयो । अहिले तीनवटा ट्याङ्कीबाट पानीको आपूर्ति हुँदै आएको छ । अढाई अर्ब रुपैयाँले करिब आठवटा त्यस्ता खानेपानी आयोजना बन्ने उहाँको अनुमान छ । तर सत्तारुढ नेकपाका स्थानीय नेताहरु भने ‘भ्यू टावर’ दमकको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।
Previous: भूटानी शरणार्थी शिविर वेलडाँगीमा आगलागी हुँदा १२ घर जलेर नष्ट
Next: दमकमा हुने प्रदेश स्तरीय बाल महोत्सव प्रति उत्साह, सवै तयारी पुरा